ह्यारीमाथि ८ आरोप: नाङ्गो तस्बिरदेखि चिट चोरसम्म (फोटोसहित) - Nepali Virals
१७ चैत्र २०७२, बुधबार १०:२०	5,089 पटक-पढिएको
यतिबेला नेपालमा बेलायती राजकुमार ह्यारीको चौतर्फी वाहवाही भैरहेको छ । उनले खाएको खानादेखि बसेको घर र हरेक क्रियाकलाप नेपाली मिडियाका लागि ‘हट केक’ बनिरहेको छ । साताव्यापी भ्रमणका लागि नेपाल आएका उनले थप ६ दिन बसाइ लम्ब्याएका थिए । यस क्रममा उनले राष्टपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई भेट्नेदेखि गोरखाको बिकट गाउँमा समेत पुगेर ढुंगा काठ बोक्ने काम गरे । ह्यारी आज राती स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
हरेक मान्छेको राम्रो र नराम्रो गुण हुन्छ । यो नियमबाट कोही टाढा हुन् सक्दैनन् । मात्र थोरै र धेरै हो । सिमा नाघ्नु र नानाघ्नु मात्र हो । राजकुमार ह्यारीका पनि केही नराम्रा कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् । उनीमाथि लागेका यी आरोपहरु आरोप मात्रै हुन् वा वास्तविक नै । त्यो समयले बताउला तर फोटोसहित सार्वजनिक भएका आरोपहरु भने नकार्न सकिन्न । उनीमाथि नाङ्गो मस्तीदेखि चिट चोरेर क्लास उतिर्ण गरेको सम्म आरोप लागेको छ । पढ्नुस उनीमाथि लागेका यी ८ आरोप ।
१. हिटलरको भेषमा ह्यारी
सन् २००५ मा राजकुमार ह्यारीका साथीले आयोजना गरेको एउटा पार्टीमा ह्यारी हिटलरले लगाउने पहिरनमा देखिए । उनको यो पहिरन सहितको तस्विर विश्वभर बिबादास्पद बनेपछि उनले सार्बजनिक रुपमा माफि मागे । माफि माग्दा उनले भने- ‘मेरा कारणले कसैलाई चोट पर्न गएको खण्डमा माफि चाहन्छु ।”
सन् २०१२ मा ह्यारीको नांगो तस्विर सार्वजनिक भयो । लस भेगासमा पार्टिमा मस्त ह्यारीको नागों फोटो उनका कुनै साथिले लिक गरिदिएका थिए । फोटोमा उनि अर्को नांगो ब्यक्तिलाई अंगालो मारिरहेका देखिन्छन् ।
सन् २००६ मा एक भिडियो सार्वजनिक भयो । भिडियोमा ह्यारी सैनिक पोशाकमा तालिममा जानका लागि विमानस्थलमा कुरिरहेको अवस्थामा देखिन्छन् । यसैबीच उनले सहकर्मी सैनिकलाई हाम्रो सानो पाकि साथी खै भन्दछन । जबकि पाकि भन्ने शब्द पाकिस्तानीहरुलाई हेपेर भनिने शब्द हो । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि ह्यारीलाई हेपाहा प्रवृत्तिको मान्छे भन्ने आरोप लाग्यो ।
५. चिट चोरेर पास गरेको आरोप
अध्ययनमा कमजोर ह्यारीले सन् २००५ मा चिट चोरेर ए लेभल पास गरेको आरोप लाग्यो । परिक्षा समय सकिए पनि त्यहाँ निरिक्षणकर्ताको रुपमा रहेका एक शिक्षकले उनलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्यो तर पछि ह्यारी र ति शिक्षक दुबैले यस कुरालाई अस्विकार गरेका थिए ।
सन् २००२ मा १७ बर्षका ह्यारी कम उमेरमा नशालु पदार्थ पिएकोमा समातिए । त्यसपछि थाहा भयो कि उनी लागु पदार्थको सेवन गर्दा रहेछन् । पछि उनले यसका लागि माफि मागे र उनका पिता प्रिन्स चाल्र्सले उनलाई सुधार केन्द्रमा पठाए । उनले त्यहाँ केहि दिन बिरामी झैं बिताएका थिए ।
८. ब्रा र बियरमा मस्ती
पार्टी र मोजमस्तीका सौखिन ह्यारीको अर्को गोप्य तस्विर सार्वजनिक भयो । हाइ क्लास पार्टीमा उनले हातमा बियरको क्यान लिएर ब्रा लगाएको अवस्थामा उनको तस्विर सार्वजनिक भयो । यसले पनि उनलाई निकै विवादमा तान्यो ।
अघिल्लो असाध्यै अशुभ मानिने ६ सपना
पछिल्लो नेपालका ६ महान नारी